Soddon sano ka dib, saamaynta ay Soomaalidu ku yeelanayso go’aannada siyaasadeed ee Maraykanka | Saxil News Network
Image captionIlhaan Cumar waxay tagtay Maraykanka ayadoo 12 jir ah, waxayna iminka noqotay soomaaligii ugu horreeyey ee Kongareeska gala
Image captionMaxamuud Nuur wuxuu ku guulaystay kursiga 60 B
Marba marka ka dambeysa bulshada Soomaalida ah waxay ku sii xoogeysaneysa go’aannada la xiriira arrimaha gobolka.
Image captionHodan Xasan waxay ku guulaysatay kursiga 62A
Dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee da’da yar ayaa muujiyay saameynta ay dadka ka soo jeeda Soomaaliya ku leeyihiin siyaasadda waddanka dunida ugu tunka weyn ee Mareykanka.
Image captionQaasim Busuri waxaa loo magacaabay madaxa golaha xuquuqda aadanaha ee St Paul
“Jagadan la ii magacaabay waxay ku saabsan tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo caddaaladda fursadaha ganacsi. Tusaale ahaan waxaan wax ka qabaneynaa cabashooyinka ku saabsan qofka xuquuqdiisa la duudsiiyo ama loo diido sababo la xiriira inuu midabkiisu madow yahay ama uu Soomaali yahay” ayuu yiri.
“Guddigeennu wuxuu ka shaqeynayaa inuu ka hor tago dhacdooyinka lidka ku ah xuquuqul insaanka iyo inuu si dhakhso ah wax uga qabto wixii dhaca, si markaas loola xisaabtamo maamulka magaalada”.
Dadka Soomaaliyeed oo meelo badan oo dunida ka tirsan qaxootinimo ugu hayaamay ayaa Jiilalkii ayagoo da’ yar qurbaha galay waxay iminka xilal siyaasadeed ka hayaan waddamo ay ka mid yihiin Canada, Yurub iyo Maraykanka